Universal အိတ်စက် မှအကောင်းဆုံး Universal အိတ်စက် မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
ပုံစံ - SVN Series
စက်သည် ဘေးထွက်တံဆိပ်ကို ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သည်။,အောက်ခြေတံဆိပ်နှင့် နှစ်ထပ်တံဆိပ်အိတ်များ.ဤပစ္စည်းကိုပြောင်းရန် နာရီဝက်သာကြာသည်။.
servo driven ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကို လက်ခံသည်။,အိတ် ၂၀၀ ဖြင့် မြန်နှုန်းမြင့် ထုတ်လုပ်မှု/မိ.
မူမမှန်ခြင်းညွှန်ပြချက်သည် စက်အား အန္တရာယ်မှကာကွယ်နိုင်ပြီး လွယ်ကူသော ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းကို ပေးပါသည်။.
အဆင့်မြင့် မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာ ထိန်းချုပ်မှုကို အသုံးပြုသည်။,လိုဂိုများကို အရွယ်အစား လျင်မြန်စွာနှင့် တိကျစွာ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။,စသည်တို့.အိတ်များပေါ်တွင်.
မော်ဒယ် ဖြတ်တောက်ခြင်း အကျယ်(မီလီမီတာ) ဖြတ်တောက်ခြင်း အရှည်(မီလီမီတာ) အရှိန်(အိတ်များ/မိ) ရုပ်ရှင်အထူ(မီလီမီတာ) ပါဝါလိုအပ်သည်။ စက်အရွယ်အစား
ဘေးထွက်တံဆိပ်အိတ် အောက်ခြေတံဆိပ် Double Bottom Seal ဘေးထွက်တံဆိပ်အိတ် အောက်ခြေတံဆိပ် Double Bottom Seal ဘေးထွက်တံဆိပ်အိတ် အောက်ခြေတံဆိပ် Double Bottom Seal
SVN-800C 60~770 60~770 80~770 60~770 60~770 80~770 30~250 30~160 30~200 0.012~0.2 9KW 4.၆x၁.၅၅x၁.65
SVN-1000C 60~770 60~1020 80~1020 60~1020 60~800 60~800 11KW 4.၆x၁.၈x၁.65
SVN-1200C 60~770 60~1220 80~1220 60~1220 60~800 80~800 12KW 4.၆x၂.00x1.65
Ultrasonic Wheel Sealing ကိရိယာ
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.carrybagmachine.com/my/universal-bag-machine-1.html
SHENG-FON PLASTIC MACHINE CO., LTD. ကမ္ဘာတစ်ခုလူတန်းစားထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်ပံ့ပိုးပေးသူအဖြစ်အသိအမှတ်ပြု Universal အိတ်စက်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အများဆုံးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ထုတ်လုပ်သူများတစ်ဦးအဖြစ်။ ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းနိမ့်ဆုံး-ရှုံးနိမ်-rate ကိုမြန်ဆန်ခဲ-အချိန်, ကုန်ကျစရိတ် -effectiveness နှင့်အကောင်းဆုံးရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များထောက်ပံ့။ ကျနော်တို့ကမ္ဘာတဝှမ်းနိုင်ငံအများအပြားနှင့်ကုန်သွယ်မှုဆက်ဆံရေးစတင်ထူထောင်ခဲ့ကြကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ကြီးထွားလာအသင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ယုတ္တိဗေဒဒီဇိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုမှ, OEM / နှစ်ဖွဲ့အများအားဖြင့်ကြိုဆိုဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးကောင်း, သင့်တော်သောစျေးနှုန်းနှင့် prompt ကိုပေးအပ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်း၏ဖောက်သည်ဖို့အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုကအသိအမှတ်ပြုသည်နေကြသည်။
သောနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနှင့်တွေ့ဆုံ။ ကျနော်တို့ဝယ်လက်အကြံဥာဏ်နှုန်းအဖြစ်ထုတ်ပိုးမှန်မှန်အလွန်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်မဆိုလိုအပ်သောအရေအတွက်မှာထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်။ ကြင်နာစွာ specification ကိုနှင့် Quotation အဘို့အကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
အကောင်းဆုံး Universal အိတ်စက် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် Universal အိတ်စက် ၏အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
Slit Seal and Patch Device ပါသောအိတ်စက်